Ndị Uwe Ojii Anwụchikọọla Ịkanda, A Na-Enyo Enyo Na Ọ Bụ Ogbu Mmadụ
Previous Article Aka Akparala Ezekudele
Next Article Mmadụ Iteghete, tinyere Ụmụ Aka, Anwụọla na Ọgbaghara Dị na Kaduna
Ndị uwe ojii na steeti Anambra anwụchikọọla ma kpụgharịa ụfọdụ ndị a na-enyo ènyò na ha na-etinye aka n'arụrụ ala, nke otu onye n'ime ha bụ maazị Ikechukwu Udensi, onye a maara dịka Ikanda, bụ onye a na-enyò na ọ bụ ogbu mmadụ.
Ikanda gbárá ahọ iri abụọ na asaa sitere Azịa n'okpuru ọchịchị Ihiala bụ onye a na-enyo enyo na ọ bụ ya na ndị òtù ya gbùrù otu nwoke a maara dịka Ndubuisi Nwokolo na mkpewara ụzọ Otumoye dị n'Ọdọakpụ Ọnịtsha, na steeti Anambra n'abalị iri abụọ na iteghete nke ọnwa Juunu ahọ 2018.
N'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ dịka ọ na-akpụgharị ndị ahụ n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe oji dị n'Amawbịa, onyeisi ndị uwe ojii na steeti ahụ, bụ maazị Mustapha Dandaura mere ka a mara na e jidere ya bụ nwoke n'Ọnịtsha site n'ọrụ nke alaka ndị uwe ojii na-ahụ maka iji ọgụgụ isi achọpụta ihe, ma kwenwèé nkwà na ha agaghị ada mbà n'ọrụ ya na n'agha ọ na-ebu megide ohi, mpụ na arụrụ ala na steeti ahụ.
O kwupùtakwara ezi njìkere ha dị ịkwàlite ezi nchekwa ndụ na akụnụba na steeti ahụ, ma kpọkùkwazie ndị ụmụafọ Anambra ka ha na-ewèta mkpesa n'aka ndị ọrụ nchekwa oge niile ma na-emekwa ka ha mara banyere ebe na mgbe ọbụla ndị omekome na-akụ akụmakụ site n'ịkpọtụrụ ha ozigbo, ma sikwazie n'ụzọ dị otu ahụ kwàlite ma nyere ha aka n'ọrụ nchekwa ha.
Ndị uwe ojii ahụ kpụgharịkwara ndị ọzọ a na-enyo ènyò na ọ bụ ha wakpòró ògigè ndị uwe ojii dị n'Ajalị, suo ya ọkụ ma bukọrọ egbe dị ebe ahụ gbafuo. Mana mmadụ ndị ahụ gọrọ aka na ọkpà ha, sị na o nweghị ihe ha mà bànyere ebubo ahụ a na-ebo ha; ọbụnadị dịka Ikanda n'onwe ya gọrọkwara agụgọ, kwuo na ya bụ onye na-arụrụ gọọmenti ọrụ, ma sịkwa na ọ bụ naanị mgbe a gwara ya na ndị òtù ya gbùrù mmadụ n'ime ahịa ka ya pụtara.
Maazị Dandaura gàzịrị n'ihu mee ka a mara na a kà na-eme nnyòcha miri èmì bànyere nkè ahụ, nke mgbe e mechara ya, a kpụpụ ndị ahụ ụlọ ikpe ma were usoro iwu nyụchaa ha anya.